GuGuGarGar – Page 37 – Daily Hot News
Shwe | December 5, 2019
ပရိသတျ ကွီရေ ဒီလ ရဲ့ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ဆုရှငျ ကတော့ ရှာဖှရေခကျနသေလို ဘယျသူပေါကျတယျဆိုတာလဲ မသိကွဘူးဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ကံထူးရှငျကတော့ ပျေါထှကျလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။ မှနျပွညျနယျ ကြိုကျထိုမွို့နယျ ဌကျပြောတောကြေးရှာ အောကျစု မှ ဒျေါထိုကျ မှ သိနျး ၁၅၀၀၀. ဆုကွီး ထိုကျတနျစှာ ဆုခူးပေးလိုကျပါပွီး ထပျတူ ဝမျးသာမိပါသညျ။
Shwe | December 1, 2019
ရိုးရှင်းတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသံတို့ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ Myanmar Idol Season3ရဲ့ Winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင် ကတော့ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလွန်းသူ တစ်ဉီးပါ။ လတ်တလော မှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင်က Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်ဖို့ ဝင်ခွင့်မရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းစွာ
ဟိုတစ်ချိန်က မြန်မာ့ အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးပြီး ပရိသတ်တိုင်း ချစ်ခင် အားပေးရတဲ့ မင်းသမီးကြီး မြတ်ကေသီအောင်က အခုချိန်ထိတိုင် သူမချစ်တဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေဆဲပါ။ မြတ်ကေသီအောင်ဟာ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေအပြင် သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်ကိုလည်း ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေက မျက်နှာကို
ပရိသတ်တွေ ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေ နဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပပဝင်းခင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ထူးရှားတဲ့ သူမရဲ့ အမူအယာလေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပပဝင်းခင် ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတဲ့
ပိုင်တံခွန် ကတော့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ သူ့ရဲ့ ခန့်ညားလွန်းတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပထိ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Celebrity တစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်..။ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် ကိုကို ပိုင်တံခွန် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသာမက အာဆီယံနိုင်ငံ အထိ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံနေရတာပါ..။ မကြာခင် က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ
(၁၀) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်း တစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
၁.၁၂.၂၀၁၉ (၁၀)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် 🙏သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး သ ၅၇၉၀၈၃ 👏သိန်း(၁၀၀၀၀) ကခ ၄၈၄၅၀၅ သိန်း(၅၀၀၀) ဋ ၄၀၂၇၅၆ ကခ ၄၆၅၀၂၈ သိန်း(၂၀၀၀) ကဂ ၁၇၇၈၄၉ င ၁၄၆၇၇၃ ကခ ၃၁၅၀၂၅ သိန်း(၁၀၀၀) ဏ ၈၃၇၆၈၂ ထ ၈၈၁၇၂၂ င ၄၉၅၂၁၈ အ
အသိပေးကြေညာခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက် စနေနေ့ (1) ဦးလှိုင်ဝင်း (ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာ) (2) ဦးအောင်မျိုးဦး(မင်းသား ဦးလေးတော်စပ်သူ) (ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာ) ဆန်းသစ်တည်ထွင် စွမ်းသဘင် စွမ်းဇာနည် ကတဲ့ ဇာတ်ပွဲ အထက်အမည်ပါ ဇာတ်ပွဲမန်နေဂျာများ သိရှိစေရန် သတိပေးကြေညာ အပ်ပါသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက်မြို့မဟာအေးစေတီ ဘုရားပွဲတော်ကြီးတွင် ၁၃၈၁
ဒီကနေ့ ဖွင့်တဲ့ (၁၀) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်
ယခု Post နေရာတွင် ထီဖွင့်ပွဲပြီးသည့်အချိန်ထိ ကျန်ရှိသောပေါက်ဂဏန်းများကို ထပ်မံထည့်ပေးသွားပါမယ်နော်….. 📜 ထီပေါက်စဉ်လဲ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ငည့်အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်း သင့်ရဲ့နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို #Share လိုက်ပါ။ 🤗 သိန်း ၁၅၀၀၀. သ ၅၇၉၀၈၃. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀၀. ကခ ၄၈၄၅၀၅. သိန်း ၅၀၀၀ ဋ ၄၀၂၇၅၆. မိုးယံ ကခ
ကံကောင်းချင် ရင် ဘုရားရှိခိုး ဖို့ မပျင်းပါနဲ့ ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်း တဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံး သုံးဖို့ စိတ် တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ကို ရေနဲ့